Aqoonkaab Ka digtoonow! Caadooyin dhaawici kara maskaxdaada | Aqoonkaab
Jan 12, 2016Caafimaadka
Maskaxdu waxay ka mid tahay xubnaha ugu muhiim san ee qofka bani aadamka ah ,qof kasta wuu jecel yahay inuu ku raaxaysto maskax caafimaad qabta si garaadkiisa ,aqoontiisa,garashadiisa,fahankisa,fekerkisa iyo xasuustiisuba u fiicnaato . hadaba shabakada aqoonkaab waxay idiin soo gudbinaysa waxyaabaha iyo caadooyinka ay tahay inaad is ka ilaaliso si caafimaadka maskaxdaadu u ilaaliso.
ka digtoonow caadooyinkan
1: Quraac la’aan : dadkan aan quraacan subixi waxa la soo derista nafaqo la’aan iyo tamar la’aan sidaasi daraadeed maskaxdu ma helayso tamar ku filan oo ay quudato taas na waxay sababi karta in maskaxdaadu hoos u dhac ku yimaado.
2:Hawo wasakhysan : maskaxdu waa xubinta u wayn ee quudata hawada ogsijiinta (oxygen) sidaasi daraadeed qaadashada hawo wasakhysan waxay u gudbaysaa maskaxda taas oo khalkhal gelinaysa hannaanka shaqo ee maskaxda.
3: Hadal yaraan : hadal la’aantu waxay sababi karta maskaxda oo howl gab noqota sidaasi daraadeed culimada saynisku waxay ku taliyaan inuu qofka u hadlo si xikmadaysan ,waxa xusid mudan inaanu maskaxda u fiicnayn hadalka aadka u dheer ee aan kala go’a lahay n
4:Feker la’aan : dareenka carriska ee maskaxdu ka jawaabto waa fekerka sidaaasi daraadeed qofka oo fekeri waaya amaba inta badan aan fekerin waxay hogaamin karta in unugyada maskaxdu qaadhaan .
5: hurdo la’aan : hurdadu maskaxda waxay u ogolaataa inay nasato oo ay xasisho , sida awgeed hurdo la’aantu waxay soo dedejisaa dhimashada unugyada maskaxda .
6: madaxa oo la daboolo xilliga hurdada: dad badani ma oga qodobkan, madaxa oo la daboolo xilliga hurdada waxay kordhisa ribanaanta hawada kaarbon-dhay-ogside (CO2) waxaanay yareysa xadiga hawada ogsijiinta taas oo waxyeelo gaadhsiin karta maskaxda .
7: kulayl badan : kulaylka badani wuxu adkeeya halbowlayaasha maskaxda taas oo hoos u dhigta awooda maskaxeed .
8:sonkor badan : qofka oo had iyo jeer quuta sonkor badan waxay khalkhal gelinaysa habka barotiin ee maskaxdu u nuugto baratiinka taasina waxay hor istaageysa inay maskaxdi kobocdo
xuquuqda maqaalka :aqoonkaab.com
qore :maxamed maxamud sardheeye
Previous PostFaa'idooyinka caafimaad eeToonta Next PostSoomaalidu maxay iga baran karaan?